सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क स्लाइड शो निर्माता अनुप्रयोग (डेस्कटप सफ्टवेयर, मोबाइल अनुप्रयोगहरू, र अनलाइन प्लेटफार्महरू) | Martech Zone
राम्रो स्लाइडशो निर्माता सफ्टवेयरले तपाईंलाई प्रभावशाली प्रस्तुतीकरणहरू वा विभिन्न अनुकूलन उपकरणहरू जस्तै टेम्पलेटहरू, ध्वनिहरू, प्रभावहरू, पाठ ढाँचा र आकारहरू, इत्यादिको साथ भिडियो विकास गर्न अनुमति दिन्छ। उत्पन्न फाइलहरू विभिन्न ढाँचामा बचत गरिएका छन् जस्तै। MPEG, MOV, .AVI वा .MP4, इत्यादि। ताकि तिनीहरू सजिलैसँग अन्य प्लेटफर्महरूमा पहुँच गर्न सकिन्छ जस्तै एन्ड्रोइड, आईओएस वा कम्प्युटर। यी प्रस्तुतीकरणहरूले तपाईंलाई विशेष अवसरहरू जस्तै जन्मदिन वा विवाहहरू अविस्मरणीय बनाउनमा मद्दत गर्न सक्दछन्, किनकि यसले तपाईंको रचनात्मकता अभिव्यक्त गर्न उत्तम तरिका प्रदान गर्दछ। तपाइँ सजिलैसँग स्लाइडशोहरू सिर्जना गर्न इन्टरनेटमा धेरै अनुप्रयोगहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ र यस लेखमा, म तीमध्ये १२ सूची दिनेछु!
भाग १: शीर्ष Free नि: शुल्क स्लाइड शो निर्माता डेस्कटप प्लेटफर्महरू
तल दिइएका उत्तम स्लाइडशो निर्माता उपकरणहरू विन्डोज र म्याकका लागि उपयुक्त सफ्टवेयर हुन्। फोटोहरूको साथ स्लाइड शो बनाउनको लागि प्रक्रियाहरू धेरै समान छन्: पहिले फोटोहरू थप्नुहोस् र त्यसपछि अडियो / संगीत थप्नुहोस्, DVD वा कम्प्युटरमा बचत गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई सामाजिक मिडियामा साझा गर्नुहोस्।
१. वान्डरसेरे फिल्मोरा
Wondershare फिल्मोरा एक भिडियो सम्पादक मात्र होईन तर तपाईंलाई स्लाइड शोहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, दुबै शुरुआती र पेशेवरहरूको लागि। यी सबैले विन्डोज र म्याकमा भिडियो र स्लाइडशो विकास कार्यहरूलाई धेरै नै सरलीकृत गर्दछ। एक उपकरणको रूपमा जसले संगीत र ट्रान्जिसनहरू, फिल्टरहरू, ओभरलेहरू, इत्यादिको साथ स्लाइडशोहरू सिर्जना गर्दछ, फिल्मोराले over०० भन्दा बढी प्रभावहरू र २० भन्दा बढी प्रतिलिपि अधिकारयुक्त संगीत प्रस्ताव गर्दछ जुन तपाईंलाई तपाईंको सिर्जनात्मकता दिनुहुन्छ।
यसले सबै लोकप्रिय फाइल ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ र स्लाइड शो सीधा यूट्यूब, Vimeo, आदि जस्ता सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरूमा साझा गर्न सकिन्छ।
धेरै सुविधाहरूले प्रस्तुति विकासलाई धेरै प्रभावकारी बनाउँदछन्।
सजीलो ईन्टरफेस को उपयोग गर्न को लागी सरल उपकरणहरु संग।
फिल्मोरामा निर्मित अडियो लाइब्रेरी छ जुन विभिन्न संगीत शैलीहरू र ध्वनि प्रभावहरू प्रदान गर्दछ
यसले संगीत, फिल्टरहरू, गति तत्वहरू, ट्रान्जिसनहरू र ओभरलेहरूका असंख्य टुक्राहरूको स्वामित्व राख्दछ।
सबै लोकप्रिय फाईल स्वरूपहरू समर्थित छन्।
सामाजिक मिडियामा सजिलो अपलोड।
२. Wondershare DVD स्लाइड शो निर्माणकर्ता
Wondershare DVD स्लाइड शो निर्माणकर्ता उपकरणले व्यावसायिक आवश्यकताहरूको लागि फीचर-धनी स्लाइडशोहरू विकास गर्न शक्तिशाली समाधान प्रदान गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू सजीलै 2D वा3डी संक्रमण प्रभावका साथ भिडियो र फोटोहरू संयोजन गर्न सक्दछन्। परिणाम भिडियो तुरून्त YouTube, iPod वा TV मा साझा गर्न सकिन्छ।
यो उपकरण प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छ प्रि-सेट सुविधाहरु संग।
यसले छवि, भिडियो र अडियो स्वरूपहरूको एक ठूलो संग्रह प्रदान गर्दछ।
अन्तिम सिर्जना लागू गर्नु अघि सम्पादन मिडियामा लागू गर्न सकिन्छ।
यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्तुतीकरणहरू ईमेल मार्फत वा सिधा अन्तरक्रियात्मक सीडीहरूमा साझेदारी गर्न अनुमति दिँदैन।
3 फ्रीमेक भिडियो कन्भर्टर
फ्रीमेक भिडियो कन्भर्टर द्रुत स्लाइडशोहरू सिर्जना गर्न एक आदर्श सफ्टवेयर हो। यसले विन्डोज पीसीको लागि सब भन्दा अचम्म तरिकामा सबै भन्दा राम्रो भिडियो र फोटो संग्रहको आयोजन गर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको स्लाइडशोमा छविहरूको एक ठूलो संख्या एकीकृत गर्न आवश्यक छ, फ्रिमेक तपाईको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
बिल्कुल नि: शुल्क र कुनै पञ्जीकरण आवश्यक छैन।
असंख्य आउटपुट फाइल स्वरूपहरू समर्थित छन्।
यसले तपाइँलाई सिधा YouTube मा तपाइँको परियोजना अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रस्तुतीकरणहरू सिधा डिभिडिको लागि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ।
सुरु गर्न कुनै टेम्प्लेट वा टेम्पलेटहरू छैनन्।
तपाईं केवल एक प्रभाव प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं स्लाइडशोमा पाठ थप्न सक्नुहुन्न।
4 विन्डोज चलचित्र निर्माता
माइक्रोसफ्टको विन्डोज चलचित्र निर्माता तपाईंलाई स्लाइडशोमा संगीत, भिडियो र फोटोहरूको मनपर्ने संग्रह थप्न अनुमति दिन्छ। भिडियोहरू वेबक्यामबाट सीधा रेकर्ड पनि गर्न सकिन्छ र त्यसपछि परियोजनामा ​​मर्ज गरियो। दृश्य प्रभाव र एनिमेसनहरू लागू गर्न यो धेरै नै सजिलो छ।
हल्का वजन र प्रयोग गर्न सजिलो प्लेटफर्म।
दृश्य प्रभावको साथ ट्रान्जिसनको ठूलो संख्या।
यसले प्रत्यक्ष सामाजिक मिडिया साझेदारी सुविधा प्रदान गर्दछ।
बजारमा उपलब्ध अन्य उपकरणहरूको तुलनामा सीमित कार्यक्षमता।
यसले सीमित फाईल ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ।
भाग २: सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क स्लाइडशो अनलाइन सफ्टवेयर
कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड नगरी वा अनुप्रयोगहरू स्थापना बिना नै प्रस्तुतीकरण सिर्जना गर्न चाहनेहरूको लागि हामीले कम्तिमा3नि: शुल्क अनलाइन प्लेटफर्महरू फेला पार्‍यौं जुन तपाईंलाई त्यसो गर्न अनुमति दिन्छ।
स्लाइडली शो एक प्रसिद्ध सामाजिक मिडिया एकीकृत अनुप्रयोग हो जसले सामाजिक नेटवर्कमा सामग्रीको सजिलो साझेदारीको अनुमति दिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो घर कम्प्युटरबाट भिडियो वा छविहरू आयात गर्न सक्दछ वा सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मबाट मिडिया पहुँच गर्न सक्दछ आवश्यकता अनुसार।
यसले साधारण प्रस्तुतीकरणहरू विकास गर्नु भन्दा बाहिर धेरै चीज गर्न सक्दछ।
योसँग धेरै समुदायमा आधारित सुविधाहरू छन्।
प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूबाट मिडिया फाइलहरू आयात गर्न सक्दछन्।
भिडियोहरू निजी वा सार्वजनिकको रूपमा सेट गर्न सकिन्छ।
यो फोटो संक्रमण र गति को लागी धेरै अनुकूलन विकल्प प्रदान गर्दछ।
यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छैन।
विकसित भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सकिँदैन।
फ्लेक्सक्लिप १००% नि: शुल्क हो तर अझै सबै उपयोगकर्ताहरूलाई सुविधाहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। कुनै डाउनलोड आवश्यक पर्दैन, किनकि यसले सबै निर्मितमा अनलाइन काम गर्दछ स्लाइड शो विकास उपकरणहरू। प्रयोगकर्ताहरूले प्लेटफर्ममा भिडियोहरू वा संगीत थप्न सक्दछन् र फाइलहरू पछि सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको साथ साझेदारी गर्न सकिन्छ।
Kizoa अर्को प्रसिद्ध अनलाइन भिडियो सम्पादक हो जसले दर्ता बिना आश्चर्यजनक सुविधाहरूमा सजिलो पहुँच अनुमति दिन्छ। उन्नत सम्पादकले एनिमेसन, ट्रान्जिसन, र प्रभावहरू समर्थन गर्दछ र अन्तर्क्रियात्मक भिडियोहरू विकास गर्न धेरै संगीत विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले सजीलै समय, अवधि, आकार वा स्थान, आदि को विवरण अनुकूलन गर्न सक्दछ।
भाग:: एन्ड्रोइडका लागि उत्तम निःशुल्क स्लाइडशो अनुप्रयोगहरू
व्यक्ति जो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको साथ स्लाइड शो सिर्जना गर्न चाहान्छन्, निम्न नि: शुल्क स्लाइडशो निर्माता अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्दछन्।
१. फोटो कहानी
फोटो कहानी तीन चरणमा सजिलोसँग उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण र चलचित्रहरू विकास गर्न सक्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले केवल उनीहरूका उपकरणहरूबाट तस्बिरहरू चयन गर्नुपर्दछ, इच्छित ट्रान्जिसन र विषयवस्तुहरूको साथ स्लाइड शो सिर्जना गर्नुहोस्, र अन्तमा बचत गर्नुहोस् वा उनीहरूको स्वाद अनुसार साझा गर्नुहोस्।
त्यहाँ धेरै फिल्टर, एनिमेशन र उपशीर्षकहरू छन्।
यसले उच्च रिजोलुसन परिणामहरू प्रदान गर्दछ।
प्लेब्याक गति प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता अनुसार समायोजित गर्न सकिन्छ।
केवल फोटोहरूको सीमित संख्या चयन गर्न सकिन्छ।
२. PIXGRAM - भिडियो फोटो स्लाइड शो
पिक्सग्राम एक सहज, सरल र शानदार उपकरण हो जुन प्रभावकारी पृष्ठभूमि प्रभावको साथ स्लाइड शो बनाउनको लागि सजिलैसँग सबै फोटोहरू स collect्कलन गर्न सक्दछ। तपाईंको स्वादमा प्रभाव समायोजनको लागि त्यहाँ धेरै अनुकूलन योग्य सुविधाहरू छन्।
सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरूमा सजिलो साझेदारी।
धेरै सुविधाहरूको साथ प्रयोग गर्न सरल।
यसले मौलिक सम्पादन सुविधाहरू र प्रभावहरू प्रदान गर्दछ।
फिल्मरागो एक मोबाईल अनुप्रयोग हो जुन प्रयोग गर्न सजिलो ईन्टरफेसको साथ अत्यधिक अनुकूलन योग्य प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ। भिडियोहरू काट्न यो धेरै नै सजिलो छ र तपाईं सामग्रीहरू विभिन्न रेडमेड थिमहरूको साथ विभिन्न फिल्टरहरू पनि लागू गर्न सक्नुहुनेछ। फिल्मोरागोले यसको व्यावसायिक सेटअप र विकास उपकरणहरूको कारण प्रयोगकर्ता समुदायबाट विशेष ध्यान लिएको छ।
यसले थिमहरूको ठूलो संग्रह प्रदान गर्दछ।
योसँग धेरै राम्रा प्रभावहरू छन् जस्तै रिभर्स, ढिलो गति र द्रुत गति, आदि।
कहिलेकाँही ठूला फाईलहरूको साथ ढिला हुन्छ।
भाग:: IOS को लागी उत्तम सित्तै स्लाइड शो निर्माता अनुप्रयोग
तपाईंको आईफोनमा स्लाइडशोहरू सिर्जना गर्न एप्पल आईमोभी प्रयोगबाट अलग तपाईं आईओएस उपकरणहरूमा स्लाइडशोहरू सिर्जना गर्न निम्न नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू पनि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
१. स्लाइड ल्याब
ती मानिसहरु जसले आफ्नो आईफोनमा धनी र सहज सुविधाहरुको साथ प्रस्तुतीकरणहरू सिर्जना गर्न अनुप्रयोगको आवश्यक पर्दछ स्लाइड ल्याब अनुप्रयोग एकदम चाखलाग्दो। छवि, संगीत र भिडियोहरू यो उपकरण प्रयोग गरेर प्रशोधन गर्न यो धेरै नै सजिलो छ। थप, कुनै पनि लम्बाइको स्लाइडशोहरू सजिलैसँग विकास गर्न सकिन्छ।
स्लाइडलाब एक उन्नत, शक्तिशाली र स्लाइडशो विकासको लागि रोचक उपकरण हो जुन पेशेवर र व्यक्तिगत आवश्यकताहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
राम्रो र प्रयोग गर्न सजिलो।
चाखलाग्दो प्रभावहरू थप्न यो धेरै सजिलो छ।
आवश्यक भएमा फोटोग्राफहरू मिलाउन अलि गाह्रो छ।
यस अनुप्रयोगले प्रयोगकर्ताहरूलाई फोटोहरू फ्रेममा संयोजन गर्न अनुमति दिन्छ, अनुकूलन अनुपात अनुपात, आकार र रंग इत्यादिको साथ। उन्नत फिल्टरहरूको साथ एक कदम अगाडि बढ्दछ अत्यधिक अन्तर्क्रियात्मक स्लाइडशोहरू सिर्जना गर्न जुन सजिलोसँग विकास गर्न सकिन्छ।
PicPlayPost प्रयोगकर्ताहरूलाई gifs, भिडियो र फोटोहरू, आदि छनौट गर्न अनुमति दिँदछ आँखा समात्न प्रस्तुतिहरूको विकासको लागि।
यो प्रस्तुतिको लागि एक सरल भिडियो एकीकरण समारोह प्रदान गर्दछ।
क्रमिक र एक साथ प्लेब्याक धेरै अनौंठो सुविधाहरूको साथ सिर्जना गर्न सकिन्छ।
यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई बहु भिडियो सेटहरूको प्रबन्धको साथ बक्स बाहिर सोच्न अनुमति दिन्छ।
यसले विभिन्न उपकरणहरू बीच सामग्री हस्तान्तरण वा बचतको लागि कुनै iCloud- आधारित समर्थन प्रदान गर्दैन।
हामीले कम्प्युटरमा गर्न सक्ने एउटा उत्तम कुरा भनेको फोटोग्राफिक प्रस्तुति सिर्जना गर्नु हो, जहाँ छविहरू एक पछि अर्को र स्वचालित रूपमा स्क्रोल गर्दछन्। हामीले कार्यक्रमहरूको प्रयोग बिना नै फोटो स्लाइडशो र छविहरू सिर्जना गर्न सबै भन्दा राम्रो वेबसाइटहरू देखाइएका छौं। यो समय तपाइँको मनपर्ने छनौट र सुरु गर्न को लागी हो!
टैग: डेस्कटप स्लाइड शो सफ्टवेयरफिल्मरागोफ्लेक्सक्लिपनि: शुल्क अनुप्रयोगहरूनि: शुल्क स्लाइड शो निर्माताफ्री सफ्टवेयरफ्रीमेक भिडियो कन्भर्टरकिजोआMicrosoftमोबाइल स्लाइड शो अनुप्रयोगअनलाइन स्लाइड शो प्लेटफार्महरूफोटो स्लाइड शोफोटो कथाफोटोpicplaypostपिक्सग्रामस्लाइडलेबहल्कास्लाइडली शोस्लाइड शोस्लाइड शो अनुप्रयोगहरूस्लाइड शो प्लेटफार्महरूभिडियो सम्पादनWondershare dvd स्लाइड शो बिल्डरअद्भुत फिल्मोरा
स्यामी एक डिजिटल मार्केटर हो र फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीको लागि उत्साही। उनी सँधै उनको सामग्रीमा केहि नयाँ कुरा अन्वेषण गर्न खोज्छिन् र मार्केटिंगमा साझेदारी सुझावहरू र युक्तिहरू मन पराउँछिन्। को लागी काम गर्दछ फ्लेक्सक्लिप, उनी भिडियो उत्पादनसँग सम्बन्धित सबै कुरामा भावुक छिन्।
जुन 13, 2021 बिहान 9:03 बजे
सामी तपाईको लेखको लागि धन्यवाद, तपाई एक राम्रो लेखक हुनुहुन्छ मलाई तपाईको लेख मनपर्छ, र म स्लाइडलाब एप प्रयोग गर्छु यो उत्कृष्ट छ, म स्लाइड शो भिडियोहरू सिर्जना गर्न Vimory एप पनि प्रयोग गर्दैछु (https://apps.apple.com/us/app/vimory-photo-video-maker/id1359573092)। यो एप प्रयोग गर्न सजिलो छ, उत्कृष्ट UI/UX र धेरै सुविधाहरू सहित।